Dhaqanka iyo Hiddaha, 01 January 2014
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #193
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonno qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #192
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonno qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto
Dhaqanka iyo Hiddaha #191
Waa barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha oo todobaadkan aan idiinku soo gudbin doonno qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto.
Dhaqanka iyo Hiddaha #190
Waa qeyb kale oo ka mid ah barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha oo todobaadkan aan idiinku soo gudbin doonno qeybtii 6aad ee taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ee dadka xididnimadu dhex-marto.
Qeyb kale oo ka mid ah dhaqanka Soomaalida ee dadka xididku dhex maro, oo todobaadkan aad u xiisa badan gabayana ay ku jiraan.
Dhaqanka iyo Hiddaha #188
Waa qeybtii 3aad oo barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee todobaadkan aan idiinku soo gudbin doonno taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu dhex-marto.
Dhaqanka iyo Hiddaha #187
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee todobaadkanna waxaan ku eegeynaa qeyb kale oo ka mid ah dhaqanka Soomaalida iyo xididka
Dhaqanka iyo Hiddaha #186
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee todobaadkan waa qeybtii ugu horeysey ee taxane looga hadlayo dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu dhex-marto.
Dhaqanka iyo Hiddaha #185
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha iyo qeybtii ugu dambeysey ee ku xiriirta sheekooyinka iyo suugaantii ay Soomaalidii hore ka yidhaahdeen Caanaha.
Dhaqanka iyo Hiddaha #184
Waa qeyb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo uu soo diyaariyo halkana ka soo jeediyo Axmed Faarax Cali Idaajaa.
Dhaqanka iyo Hiddaha #183
Dhaqanka iyo Hiddaha # 182
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxa aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo maasooyinka ay Soomaalidii hore kaga hadleen qiimaha "Caanaha"